Igama lamazwe omhlaba we-antibiotic Furagin - Furazidine, ngokwezinto ezisebenzayo zomuthi. Itholakala kuma-capsules, i-powder yomjovo, umhlabathi wokusetshenziswa kwangaphandle namaphilisi.
Iyini iFuragin ehloswe? Ukubuyekezwa kodokotela kusikisela ukuthi lo muthi, osuselwa ku-Nitrofuran, uthathwe kahle ngezinye izinhlobo ze-microgrims-gram-negative, ezisebenza ngokuqala kwe-nucleic acid. Isidakamizwa siyingozi kuShigella spp, Streptococcus spp, Klebsiella spp, Staphylococcus spp, Klebsiella spp, nezinye izinambuzane eziningana.
Furagin, imibono yezobuchwepheshe ayinangqondo, i-bacteriostatic ne- bactericidal. Lokhu kusho ukuthi, e-concentration concentrous, i-furazidine equkethe imithi ivimba ukukhula kwe-microorganism nokukhiqiza kwabo, futhi emazingeni aphezulu abulala.
Ukuze isidakamizwa sibhekane nesifo ngokuphelele, udinga ukuyisebenzisa ngokufanele. Futhi akuyona nje ukukhetha okulungile kwesilinganiso, kodwa futhi mayelana nesigungu sezifo lapho uFuragin enza khona kangcono kunamanye ama-antibiotics, futhi futhi mayelana nokwamukelwa kwawo okulungile.
Isidakamizwa siboniswa ekwelapheni izifo ezithathelwanayo-izifo ezithathelwanayo: urethritis, cystitis, arthritis purulent noma pyelonephritis. Ubhekana ngokugcwele nama-pathogens of keratitis, izifo zobulili zesifazane. Izixazululo zezidakamizwa zisetshenziselwa ukugeza nge-peritonitis, conjunctivitis, ukushisa. Ngaphezu kwalokho, lesi sidakamizwa sisetshenziselwa ukuvimbela ukutheleleka emisebenzini eyinkimbinkimbi.
Ukungahambi kahle kwezidakamizwa ukuthi i-Furagin iphikisana nokukhulelwa, isibindi nesifo sezinzwa zesistimu. Kufana nokuhluleka kwezinso, ukucindezeleka, nezinye izifo. I-Furagin yezingane ezineminyaka engaphansi kwengu-1 nayo ayinqunyiwe - isidakamizwa sinamandla kakhulu, singathinta kakhulu umzimba womntwana.
Kungenzeka yini ukuba nethemba ukuthi ngeke kube khona ukusabela okubi endleleni yokwelashwa nale nqubo? I-Furagin, izibuyekezo zeziguli ezithatha, ziqinisekisa lokhu, zithinta wonke umuntu ngezindlela ezihlukene, noma kunjalo, njenganoma iyiphi enye imithi yokwelapha. Kwezinye iziguli, kungabangela ukusabela okweqile (ukuqhuma, ukuvuvukala, ukuvuza). Abanye bakhononda ngosizi, ubuthakathaka. Ezinye iziguli zabika ukuhlanza, ukukhanda ikhanda, ukuphazamiseka kwamathumbu, noma ukungajwayelekile emisebenzini yesisu. Kodwa-ke, ukuhlanza, isifo sohudo kanye nesiphithiphithi esivela kwisidakamizwa "Furagin", ukubuyekezwa kuqinisekisa lokhu, kuyinto engavamile kakhulu. Ngokuphawulekayo, ukudla kwesithakazelo kunciphisa.
Ngokweqile okungaphezu kwalokho, kunconywa ukuba uphuze amanzi amaningi, uphathe izimpawu, futhi kungcono ukwenza lokhu emtholampilo.
I-Furagin, ukubuyekezwa nodokotela, neziguli kule ndaba zihlangene, ziyasiza uma zithathwe kahle. Ngokuvamile uhlelo lokuqokwa luqokwa ngumchwepheshe oqaphela izici zomzimba wesiguli, ukuxilongwa, ubudala, isisindo.
Ukulungiselela amajojo kuhluke kakhulu ekuhluleni okulula ngamanzi. Isidakamizwa sichithwa emanzini ashisayo omjovo. Isixazululo esilandelayo siphuthumiswa ngokushesha, sisetshenziselwa ingilazi yeglasi ingilazi engathathi hlangothi, inzalo yi-steam, igeleza ngempela, kumaminithi angu-110 ° 30-45. Kungenxa yale nqubo eyinkimbinkimbi yokulungiselela ukujova ukuthi izijovo zomuthi zinconywa ukuba zifakwe esibhedlela.
Ukwelapha ngamaphilisi abantu abadala ngokuvamile kuqala ngokuthatha izicucu ezimbili (100 mg) izikhathi ezine ngosuku, bese kwehla kufika ku-300 mg ngosuku. Ukuvimbela, 50 mg wezidakamizwa ngokwanele. Inkambo yokwelashwa ayilokothi idlule izinsuku ezingaphezu kwezingu-8. Uma ukuthuthuka kungenzeki, ukwelashwa kuphazanyiswa futhi kuphindwe emva kwamasonto amabili.
Ngesikhathi sokwamukelwa kwezidakamizwa, "Furagin" ngokuvamile ivame ukuphuza kakhulu isiphuzo kanye nezinye antihistamines. Izinyathelo ezinjalo zisiza ekuvimbeleni ukusabela okwe-allergen okungenzeka ngesikhathi sokwelashwa ngamanani amakhulu omuthi.
Kungaqali Sniper Elite 3 - yini okumele ngiyenze?
Edvard Dzhenner: Biography, izithombe kanye akufezile
Revival: Kuyini Renaissance, futhi yiziphi imiphumela yayo?
Izisekelo okunomsoco efanele kwesisindo amamenyu, izincomo okunomsoco kanye nokubuyekeza
BAA 'Primadofilus': isitatimende